I-RARE 2BR Brownstone Parlour w/ 11 ft. Ceilings
I-i-condominium (condo) ephelele ibungazwe ngu-Jaden
Isitezi se-brownstone enhle enhliziyweni ye-Hoboken. Ikhishi elihle elishiswe yilanga, i-condo enamakamelo amabili anobumba bokuqala, usilingi olungamamitha ayi-11, iphansi elihlanganisiwe, izitini eziveziwe, iminyango ephaketheni elihle, izindondo ezimangalisayo zophahla kanye nokulungiswa kokukhanya okuhle. Ikhishi nokugeza kuthuthukiswe ngemabula kanye nothayela ongaphansi komhlaba, i-TV ehlakaniphile engu-65" egumbini lokuhlala, nezinto ezintsha zikagesi, ezihlanganisa iwasha/isomisi!
Uhambo olufushane oluya emanzini kanye nesitimela se-PATH, isitobhi esisodwa ukusuka eWest Village eManhattan.
Kunamakamelo okulala amabili anemibhede egcwele. Igumbi elilodwa lokulala linombhede olungisekayo onokulawula ngogesi ukuze uthole ubuthongo obuhle. Ikhishi lalungiswa ngo-2020 ngothayela ongaphansi komhlaba, usinki wepulazi, i-quartz yesitayela se-carrera-marble kanye nomshini wokuwasha izitsha wensimbi engenasici. Igumbi lokuhlala linezihlalo ezivela ePottery Barn kanye nosofa ovela eMaiden Home. Kunenqwaba yezincwadi ezingafundwa emashalofini kulabo abafuna ukwazi. Igumbi lokudlela lihlala abantu abangu-8 futhi igumbi ngalinye lineshaneli eliyingqayizivele elikhethelwe ukufanisa ukuhlobisa kwegumbi. Futhi ngokuqinisekile i-Fios 1gb WiFi!
4.91(43 okushiwo abanye)
Indawo yomakhelwane iyindawo yomndeni esezingeni eliphezulu, ephephe kakhulu futhi ethulile, indawo ekahle yokubaleka imizuzu nje ukusuka edolobheni, okuyindawo eyodwa esitimeleni i-PATH.
Khona kanye ngaphandle kwefulethi kukhona iChurch Square Park enhle, enezinkundla zebasketball, ipaki yezinja encane nenkulu, futhi iyindawo ekahle yokwenza ipikiniki ngezimpelasonto. Ngesikhathi sasentwasahlobo, imakethe yabalimi bakwaHoboken ingaphandle kwesakhiwo njalo ngoLwesibili. I-Papersource, i-Anthropologie, i-Aspen Market, i-Starbucks, ne-Sephora, kanye nezinye izitolo nezindawo zokudlela eziningi zizungeze ekhoneni lase-Washington St. I-brownstone iqhelelene ne-Hoboken waterfront enhle, isitimela se-PATH, nesiteshi samabhasi, futhi uhambo olusheshayo oluya e-NYC (isitobhi esisodwa nje ukusuka eWest Village).
Ngizoba kude nje uma ngidingeka. Kukhona okufakwa ngaphandle kokuthintwa kwakho ngebhokisi lokukhiya futhi ungathumela umbhalo noma ungishayele noma kunini!
UJaden Ungumbungazi ovelele